8 ก.ย. 2562 - 18:02 น.
ကိုရီးယားစစ်ပြီးကာလမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားကို ကူညီခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ကျေးဇူးကို မမေ့ဘူးလို့ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ မွန်ဂျေအင်း က မြန်မာပြည်လာရောက်စဉ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း က ရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်များဖိုရမ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း အဲဒီပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMFCCI ရဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"ကိုရီးယားစစ်ကြီးပြီးတော့ စားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ကျေးကို သူတို့မမေ့ဘူးတဲ့။ အဲဒီကျေးဇူးရှိတယ်ပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ လောက်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ သောင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆန်ကိုကူညီပေးတာဟာ ကိုရီးယားမှာ ဆင်းရဲပြီးစားမရှိ တဲ့အချိန်မှာ တကယ်ထိရောက်တဲ့ကူညီပါလို့" ပြောသွားကြောင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးထက် စီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ မစ္စတာ မွန်ဂျေအင်း ရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ်မှာ ကိုရီယားနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြား နားလည်မှုစာချွှန်လွှာ ၁၀ ခုကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ တောင်ကိုရီးယားသံတမန်အသိုင်းအဝိုင်းက သိရပါတယ်။
အဲဒီနားလည်မှုစာချွှန်လွှာတွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်းက ဒလတံတားစီမံကိန်း၊ ကမ်းလွန်စီမံကိန်း၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ နည်းပညာ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေက မြန်မာအစိုးရကို စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ဖို့ဖိအားပေးနေချိန်မှာ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း က မြန်မာကို လာရောက်ခဲ့တာကြောင့် တောင်ကိုရီးယားဟာ မြန်မာရဲ့အနာဂတ်မှာ အရေးပါတဲ့စီးပွားရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွေက လာတဲ့ မွန်ဂျေအင်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်
တကယ်တော့ ကိုရီးယားစစ်ပွဲကာလနဲ့ စစ်ကြီးပြီးတဲ့ကာလကတည်းက တရုတ်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အနေအထားကိုထည့်သွင်းစဉ်စားပြီး နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားမထိခိုက်အောင် မြန်မာက တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအကြား ဆက်ဆံရေးမျှအောင် နေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့က တောင်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ချန်ဒူးဝမ်ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဗုံးခွဲလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုနောက်ကွယ်မှာ မြောက်ကိုရီးယားပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးမှာ အချိုးအကွေ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ မြန်မာက မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ သံတမန်ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းစာတွေက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း က ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ ကျဆုံးခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အုတ်ဂူကိုလည်း သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကိုလည်း သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ မွန်ဂျေအင်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖိုရမ်မှာ အလွှာအသီးသီးက မြန်မာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အရေအတွက်ဟာ ရာဂဏန်းရှိတယ်လို့ ပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ပြောပါတယ်။ သမ္မတမွန်ဂျေအင်းက ကိုရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဟာ ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံရှိနေပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာ အဆင့် ၆ မှာရှိနေတယ်လို့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြည်တွင်းပဋ္ဋိပက္ခကြောင့် နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပြီး စီးပွားရေးကို ထိခိုက်မှာကို မစိုးရိမ်ဘူးလားလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ စိုးရိမ်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို တော်တော်လေး စိတ်အားထက်သန်တာတွေ့ရတယ်။ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးကို ပူးပေါင်းပြီးတော့ ချမ်းသာမှု၊ ကြွယ်ဝမှုဆီသွားမယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တောင်ရှိတယ်လို့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် က ပြောပါတယ်။ ပြာပုံကနေ ခေတ်မီတိုး တက်တဲ့နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံဖြစ်လာအောင် ကိုရီးယားလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာအနေနဲ့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း က ယုံကြည်ကြောင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ပြန်ပြောပြပါတယ်။
"စစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါ ပြာပုံအထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ အနေအထားနဲ့ အခုလက်ရှိသူတို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြတာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့က ဒီလောက်အနေအထားကို လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ဒီလိုအနေအထား ရောက်အောင် သူတို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့" သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း က ပြောသွားတာကို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်က ပြန်ပြောပြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ နိုင်ငံရေးထက်စီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ သမ္မတမွန်ဂျေအင်းရဲ့မြန်မာခရီးစဉ်